The Coolest H1 Day Ever - Expert Of Semalt, Natalia Khachaturyan
Ny orinasa rehetra, lehibe na kely, dia mikendry ny hampanan-karena ny tombom-barotra. Mba hahatratrarana izany dia tsy maintsy miantoka fa maro ny olona no te hahazo sy liana amin'ny vokatra sy ny serivisinao. Content marketing dia fomba manan-danja hahitana izany mitranga izany satria manatsara ny fizahanao ny SEO
Ny tetikady tonian-dahatsoratry ny Semalt , Natalia Khachaturyan, dia manazava fa ny marketing aman-danja ny sehatra midadasika, ary ny ankamaroan'ny olona dia tsy miraharaha ny antsipirihany amin'ny tsenan'ny votoaty madinika. Ity ny marika H1 izay mety ho toa kely fotsiny. Na izany aza, dia zava-dehibe ny tsy fahombiazany na ny fahombiazan'ny marketing amin'ny votoatiny.
Inona ny T1 H1?
Rehefa mamorona antontan-taratasy ianao, dia azonao atao ny mizara ny lahatsoratrao amin'ny fizarana tsirairay mba hamakiana mora. Azonao atao ny mametraka lohateny samihafa amin'ny pejy tsirairay. Ireo lohateny dia miseho kokoa noho ny soratra eo amin'ny soratra. Azonao atao koa ny manampy lohapejy hafa izay tsy mitovy amin'ny habeny. Anisany ny halavan'ny H2, H3, ary H4. Ny marika H1 dia natao hampirisika ny mpamaky hamaky ity fizarana ity.
H1 dia azo lazaina ho marika HTML izay manondro marika manokana ao amin'ny tranokala.
HTML - Ity no fiteny fanoratana amin'ny teny hypertext. HTML dia ampiasain'ny tranonkala maro mba hamoronana ny tranonkalany.
Andro - Fomba iray mampiseho ny tranokalan'ny tranonkala ny fomba tokony hampisehoana ny votoatiny.
Ny lohateny - HTML dia misy lohateny enina avy ao amin'ny H1 ka hatrany H6 ary H1 no heverina ho andro manan-danja indrindra ary ny enina no kely indrindra..Ny marika dia samy hafa noho ny habe H1 no lehibe indrindra ary H6 no kely indrindra.
Fitsipika hanampy anao hamorona ny tsara indrindra H1 tags
Ataovy azo antoka fa ilaina ny tenanao H1 ary manome anao ny vokatra tsara indrindra. Mba hahatratrarana izany dia mila manaraka torohevitra ianao mba hahazoana antoka fa mpilalao H1 ny tagso ary ireto torohevitra ireto dia:
Ampiasao ny marika H1
Ny takelaka tsirairay dia mitaky famantarana iray H1. Ny fanomezana ny marika dia tsy manampy ny pejy. Izany dia satria, tahaka ny môtera karazana fitadiavana amin'ny pejy tsirairay, dia mety ho mora kokoa ny asa raha mifantoka amin'ny ezaka iray amin'ny h1 iray izy ireo. Ny fananana azy ireo amin'ny pejy tokana dia tsy voatery hanakorontana ny milina fikarohana fa mety handroaka ny heriny.
Ny marika dia tokony mamaritra ny votoatin'ny pejy
Izany dia hanome ny mpamaky ho fanatsarana izay tokony ho andrasany hahita azy ireo alohan'ny hanombohany mamaky ilay lahatsoratra. Amin'ny ankapobeny, ny tag H1 dia tokony hitovy amin'ny tag amin'ny lohateny. Izany no lohatenin'ny bilaogy. Ny tanjona voalohany amin'ny H1 tag dia ny hanomezan'ny mpamaky fanindroany ny zavatra hovakiny.
Tsy tokony ho mihoatra ny 70
Ny tarehimarika fara-fahakeliny dia tokony ho 20 ary 70 fara fahakeliny. Aza manitatra ny halavan'ny lavaka. Raha toa ka ela loatra ilay marika, dia mety hanimba ny herin'ny HTML HTML.
Ity lafiny iray ity dia singa manan-danja indrindra ao amin'ny blôginao. Mba hisorohana izany, tokony ho matanjaka, hita maso ary lehibe izy. Ataovy araka ny azonao atao ny manamboatra endrika, amin'ny fampiasana ireo endritsoratra sy styles rehetra ilaina mba hampitsaharana azy.
Mampiasà teny manan-danja
Ny fampiasana tenimiafina fohy dia mety haka fanahy anao amin'ny fametrahana ny lohan-drakitra amin'ny teny fanalahidy izay mety mahatonga azy hanana adidy avo lenta loatra. Tsy azo ekena izany satria manimba ny fizotran'ny lahatsoratra izy ka mampidina ny kalitaony.
Ny h1 tag dia singa iray manan-danja amin'ny fanatsarana ny SEO anao, ary raha diso ianao dia mety hanimba ny tranokalanao. Aza manadino ny fanatsarana, fa azonao antoka fa manana ny teny fanalahidy tianao amboarina amin'ny anaram-boninahitra iray ianao Source .